Uphononongo: UAdam Sandler 'Ihotele iTransylvania 3' Ngaba ziLooney Tunes zanamhlanje - Iimuvi
Eyona Iimuvi 'Ihotele iTransylvania 3' Yeyona nto ikufutshane kwaBantwana banamhlanje kwiClassic Looney Tunes
'Ihotele iTransylvania 3' Yeyona nto ikufutshane kwaBantwana banamhlanje kwiClassic Looney Tunes
Ihotele iTransylvania 3.Imifanekiso yeSony
Akukho franchise yoopopayi yangoku ebeka ibango elomeleleyo kwi-snap, crackle kunye pop ye-cartoon yokuzonwabisa kunokuba Ihotele yaseTransylvania . Ngabasebenzi bayo bezinto ezingalunganga kunye neepenchant zayo zokolula isikrini ezigcwele iigags ezibonakalayo, ikwindawo entle phakathi komdlalo ohlekisayo kaHanna-Barbera kunye ne-anarchy ebonakalayo yeLooney Tunes.
Inxalenye yesithathu ye-movie franchise, Ihotele iTransylvania 3: Ikhefu lasehlotyeni, ihambisa ngokuthembekileyo kuthotho 'isithembiso esithobekileyo seswekile yenyani yempama. Ifilimu iyathandeka kwaye iphazamise. Ngelixa igqithisa imixholo yayo yosapho kunye nokufumana uthando kwisenzo sethu sesibini (nangona iDracula, kwiminyaka yobuxoki kunye nenkcubeko ye-pop mileage, mhlawumbi isondele kwisenzo sakhe samawaka angama-30), oku akubalulekanga kubaphulaphuli abakhulele kwezi theses Iimuvi kwaye awusayi kuphoxeka kuzo.
Kwintshayelelo ehlekisayo egcwele ubundlobongela obuhlekisayo, saziswa ku-Abraham Van Helsing (uthotho omtsha uJim Gaffigan) kunye nomzamo wakhe ongaphumelelanga weminyaka eli-120 wokubulala i-vampire Dracula (uAdam Sandler obuyayo, esenza ilizwi eliye labacaphukisa abaninzi bethu Kwikota yeshumi ngoku). Ngaphandle kwendlela yakhe yokutya ekhathazayo (engakhange ibhekiswe apha), uDracula uboniswa njengomntu olungileyo ukuba umntu othandekayo oqhuba ihotele apho abantu be-ilk yakhe banokuphathwa ngokufanelekileyo, kwaye batshate ngaphandle kokutsala umlilo kunye neefolokhwe.
Xa intombi kaDracula, umququzeleli wezehlo ehotele uMavis (Selena Gomez), ethatha isigqibo sokuba uxinezelekile, umbhalela ikhefu lokuhamba ngenqanawa kunye nabo bonke abahlobo bakhe be-monster: UFrank, igongqongqo likaGqirha Frankenstein (uKevin James); UGriffin, iNdoda engabonakaliyo (uDavid Spade); UWayne i-Werewolf (uSteve Buscemi) kunye nenkunkuma yakhe yamantshontsho; kunye nayo yonke into yokungcangcazela. (UMavis kufuneka abeneGroupon.) Kwinqanawe, uVan Helsing, ngoku oyintloko engafakwanga emzimbeni eqhotyoshelwe kwinto eyomileyo eqala apho, abuyise umnqweno wakhe wokubulala uDracula ngelixa ivampire izama ukufumana uthando nomphathi wenqanawa, u-Ericka (UKathryn Hahn).
IHOTELE TRANSYLVANIA 3: IKHEFU LOKUSHUMELA IXESHA ★ 1/2
(Iinkwenkwezi ezi-2.5 / 4 )
Yeluswa nguwe: Genndy Tartakovsky
Ibhalwe ngu: UGenndy Tartakovsky kunye noMichael McCullers
Inkwenkwezi: UAdam Sandler, u-Selena Gomez, uKathryn Hahn, noAndy Samberg, uKevin James, uSteve Buscemi noJim Gaffigan
Ixesha lokuqalisa: I-107 imiz.
Ngenxa yokuba ibali leholide kunye ne-mad-blood, i-mustachioed hunter ekufuneni okutshisayo, eli fakelo liza kufutshane ne-Looney Tunes edibeneyo kunanoma yiphi ifilimu yangaphambili kwinqaku. (Ngaba bekungabonakali ngathi zii-Bugs Bunny, kwisidalwa esingakhange sibonakale sinomsebenzi, sasikhona njalo Ukuya eholideyini?) Amanqaku e-symphonic ashinyeneyo avela ku-Devo's Mark Mothersbaugh-egxininisa i-gags ngamazwi anyukayo, ubhedu kunye ne-timpani-iqhuba le ngongoma ekhaya. Umqambi weMerrie Melodies uCarl Stalling uya kuba neqhayiya.
Abantu abadala banokuphoxeka kukuba i-movie incinci kakhulu ekuguqulweni kwezi shoti zeklasi iWarner Bros. Kwangelo xesha, umxholo wefilimu wokwamkelwa udlala njenge-anecdote ethambileyo kodwa ebalulekileyo kwezinye ukunganyamezelani okungendawo okuye kwangena kwintetho yethu yesizwe kwaye kuthathwe ziindlebe ezincinci. Xa umphathi wenqanawa ebhengeza phambi kwepati, Silapha, sineenwele, kwaye lilungelo lethu ukuba soyike, akukho nzima ukuva ama-echoes ekhala ngokwasendulo ngamalungelo oluntu abathandana nabathandana nabantu abathandana besini esinye.
Njengomnye umzekelo wenkcubeko engenakubalwa yeenkcubeko ezigcwele ubukho buka-Adam Sandler kunye nabahlobo bakhe abamangalisayo bokuqokelela, Ihotele eTransylvania 3 inokuba yindawo entle yokuhlala abantu abadala abathile. Kodwa kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba izinto ezingaginyisi mathe nakubani na owayengavukanga kangako ngeminyaka yoo-1990 adlala ngokumangalisayo xa usithi, ungena kwibanga lesihlanu… iMacarena kunye neSandler's oobi-boo-boo Intetho yabantwana yimizekelo ephambili.
Ukungabinamthwalo kunye nokugxeka kwethu, abo bantwana bakufumanisa kuyinto ehlekisayo. Kwaye uyazi ukuba yintoni, banokuba nje kwinto ethile.
Ndathatha ipilisi e-Ibiza: I-Irony engenakwenzeka yeNgoma yam yokugqibela yeHit kunzima ukuyihoya
'Umbhali wokubhala' Ngaba yiNetflix eNtsha yeNzwa ongakhange uve ngayo
NgoTrump Slumping, uFox Sycophant Sean Hannity ufumana uKhatywayo kuwo onke ama-Angles
UHillary Clinton ngewayenguMongameli olunge ngakumbi kunoBarack Obama
Ngaba phantsi ingoma apple yorhwebo
yimalini eyenziwe ngeplanga
angela merkel umtshato wesini esifanayo
Njani ulwandle alufanga
Ngaba ikhona imvelaphi yokujonga ngokukhululekileyo?